ကြောင်လေးသေသွားတဲ့အပေါ် အရောင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှု !!!! - JAPO Japanese News
သော 21 Feb 2020, 10:19 မနက်
ကြောင်လေးဆော့ဖို့အတွက် ကုတ်ခြစ်လို့ရတဲ့ ကစားစရာပစ္စည်းကို အင်တာနက်ကနေမှာယူခဲ့ပေမဲ့ ပစ္စည်းမရောက်ခင်မှာပဲ ရုတ်တရက် ကြောင်လေးသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကြောင်လေးမရှိတော့ဘူးလို့ အကျိုးအကြောင်းရှင်းပြပြီး မမှာယူဖြစ်တော့ကြောင်းပြောပြတော့ ကုမ္ပဏီဘက်ကနေတုံ့ပြန်လာမှုက အရမ်းအံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။
အင်တာနက်လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ Online Shopping လုပ်ရတာ အရမ်းကိုသက်သာပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းမတွေ့ရတော့ တော်တော်များများရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကအေးစက်ကြတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
လူတစ်ယောက်က သူမွေးထားတဲ့ကြောင်လေးအတွက် ကုတ်ခြစ်လို့ရတဲ့ကစားစရာကို Online Shopping တစ်ခုကနေမှာယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကြောင်လေးကပစ္စည်းမရောက်ခင်မှာပဲ အကြောင်းတစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသွားခဲ့တယ်။
ကြောင်လေးလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက် မှာထားတဲ့ပစ္စည်းကို မမှာယူတော့ကြောင်းပြောရတော့မှာပေါ့။ အရမ်းချစ်တဲ့ကြောင်လေးအတွက် ဝယ်ခဲ့ပေမဲ့ မလိုအပ်တော့ဘူး…။ အဲ့ဒါရှိနေရင်တောင် ကြောင်လေးကိုသတိရပြီး ငိုနေမိပါအုံးမယ် ဆိုပြီးသူတွေးခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူဟာ မမှာယူဖြစ်တော့ကြောင်း အကျိုးအကြောင်းနဲ့ ကုမ္ပဏီကိုစာပို့လိုက်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအခါမှာတော့ ကုမ္ပဏီက နားလည်ပေးပြီး Cancel လုပ်တဲ့အတွက်ကိုတောင် ပိုက်ဆံမယူပါဘူး။
နောက်ပြီး မှာယူစဥ်က ရေးထည့်ထားတဲ့ အိမ်လိပ်စာအတိုင်း ပန်းစည်းတစ်ခုရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
ဆိုတဲ့ စာနဲ့အတူ ပန်းစည်းလေးက အိမ်ရဲ့ တံခါးဝရှေ့မှာရောက်နေခဲ့တာပါ။
ဒီလိုပိုပေးလာတာကတော့ သေချာတယ် အရောင်းကုမ္ပဏီကပါပဲ။
ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုအပေါ် သေဆုံးသွားတဲ့ ကြောင်ကလေးရဲ့ ပိုင်ရှင်က နွေးထွေးမှုတွေရလိုက်တာအမှန်ပါပဲ။
နောက်လအနည်းငယ်ကြာတဲ့အခါမှာတော့ ကြောင်ပိုင်ရှင်ကနောက်ထပ်ကြောင်လေးတစ်ကောင်ကို ဝယ်ပြီးအိမ်မှာမွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာလည်း အရင်မှာယူခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီမှာပဲ ကြောင်းလေးဆော့ဖို့ အလားတူကစားစရာကို မှာယူခဲ့ပြန်တယ်။
ယခင်ကြောင်လေးဆုံးရှုံးခဲ့ရသူရဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်မှာယူတဲ့ messageကိုတွေ့တဲ့အခါ
ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီဘက်ကပြန်စာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့တွေက ကိုယ့်ရဲ့ အနီးမှာရှိနေသူတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အသိအကျွမ်း ရင်းနှီးတဲ့လူတွေဆီတော့ ပန်းလှလှလေးတွေ၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေပို့ဖို့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အပြင်မှာမမြင်ဖူးဘဲ အင်တာနက်ကနေပဲ သိတဲ့လူတွေဆီ ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ အနည်းငယ်ခက်ခဲကောင်း ခက်ခဲလိမ့်မယ်နော်။
ဒါပေမဲ့လည်း ဒီအရောင်းကုမ္ပဏီရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကတော့ အတူတူလိုက်ဝမ်းနည်းပေးသလို၊ အတူတူဝမ်းလည်းသာပေးတာကို ကျွန်တော်သတိထားမိတယ်။
ကြောင်းလေးတွေကိုချစ်တတ်တဲ့စိတ်က ဒီအရောင်းကုမ္ပဏီမှာလည်းတွေ့ရတဲ့အတွက် ဒီကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ ကြောင်းလေးတွေအတွက်ပစ္စည်းက စိတ်ချရမှာအသေအချာပါပဲ။
ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ အင်တာနက်ကနေလည်း နွေးထွေးတဲ့ customer service တစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်ကြောင်း စာဖတ်သူတို့ ဗဟုသုတရသွားမယ်လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။
အခြေခံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗဟုသုတ !! ကုန်ပစ္စည်းပေါ် မူတည်ပြီး ကြော်ငြာနည်းကိုပြောင်းပါ !!